Askari ka tirsan ciidanka Xoogga oo saakay xukun lagu riday. - Latest News Updates
Askari ka tirsan ciidanka Xoogga oo saakay xukun lagu riday.
Maxkamad ciidamada qalabka sida ayaa saakay waxaa ay xukun dil ah ku riday Dable Xoogga Dalka Cabduqaadir Maxamuud Cali oo loo heysto dilka Marxuum Cabdiraxmaan Cadow Maxamuud, dilkaasi oo ka dhacay degmada Mahadeey ee Gobalka Shabeelada Dhexe Sanadkii 26-11-2018.
Marxuum Cabdiraxmaan Cadow Maxamuud ayaa aha wada gaari oo ku safrayay qeyba kamid ah gobalka Shabeelada dhexe, waxa uu caan ka ahaa deeganada gobalkaasi, marxuumka ayaa istaagsanaa halka loogu tala galay hubinte gaadiidka ee ah meesha laga soo galo degmada Mahadeey ee goalka Shabeelada Dhexe, ciidamada amniga ee ku sugnaa goobta ayaa hubinyay gaariga iyo laba qof oo kale oo la socday balse nasiib xumo Dable Xoogga Dalka Cabduqaadir Maxamuud Cali ayaa ka soo toogtay meel fogaan u jirto taasi oo sababtay geerida Marxuumka, sidaasi waxaa daabacday maxkamada ciidamada.
Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa waxaa soo bandhigeen , Qiraalka eedeysanah, Markaatiyaal gaariga la saarnaa marxuumka, Warqadda cadeynta dhimashada oo ku lifaaqan sawirka Marxuuumka iyo qoreygii lagu toogtay Marxuum Cabdiraxmaan Cadow Maxamuud ayaa lagu yiri qoraalka.
Ugu dambeyn Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida oo warbaahinta la hadlay ayaa maanta go’aan ka soo saareen dhageysiga dacwadda loo heystay, Dable Xoogga Dalka Cabduqaadir Maxamuud Cali, waxaa ayna Maxkamadda ku xukuntay dil-toogasha ah oo ah qisaasta Marxuum Cabdiraxmaan Cadow Maxamuud.